Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Saint Kitts na Nevis » Njem na-enweghị Visa sitere na Palestine gaa St Kitts na Nevis ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Akụkọ Palestine na -agbasa • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Saint Kitts na Nevis • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Njem na-enweghị Visa sitere na Palestine gaa St Kitts na Nevis ugbu a.
Palestine bụ mba nke anọ mebere mmekọrịta mmekọrịta na St Kitts na Nevis mgbe Burkina Faso, Gabon na Egypt n'ime izu anọ gara aga.
St Kitts na Nevis Tourism na -edekọ nkwekọrịta diplọma nke anọ n'ime ihe na -erughị izu anọ.
Mwepu nke enweghị visa na-enye ohere njem na-enweghị mgbochi nye ụmụ amaala mba ndị bịanyere aka na nkwekọrịta ahụ.
Ihe ùgwù a gbasakwara ndị mmadụ nwetara ikike ịbụ nwa amaala site n'ụzọ akụ na ụba.
Onye isi ala nke Nevis na onye minista mba ofesi nke St Kitts na Nevis, Hon. Mark Brantley nọ na -ewulite mmekọrịta mba ofesi n'ime ọnwa gara aga.
N'oge ncheta ncheta afọ 60 nke ndị otu na-akwadoghị na Serbia n'izu a, Minista Brantley bịanyere aka na nkwekọrịta iwepụ visa n'efu na Palestine.
Palestine bụ mba nke anọ ha na ha mekọrịta mmekọrịta mmekọrịta St Kitts na Nevis mgbe Burkina Faso, Gabon, na Egypt n'ime izu anọ gara aga.
"Ụbọchị akụkọ ihe mere eme maka St Kitts na Nevis ka anyị na-abịanye aka na [a] nkwekọrịta iwepụ visa na HE Riad Maliki Foreign Minister [nke] Steeti Palestine na-enye ohere njem enweghị visa n'etiti ndị obodo anyị abụọ. St Kitts na Nevis na -aga n'ihu ịgbasa akara ukwu diplọma ya n'ụwa niile, "Minista Brantley dere na Instagram.
Mwepụ nke enweghị visa na-enye ohere njem na-enweghị mgbochi nye ụmụ amaala mba ndị bịanyere aka na nkwekọrịta ahụ. Nke a pụtara na visa mbata adịghị mkpa maka ụmụ amaala obodo ọ bụla tupu ha abanye na mba ahụ bịanyere aka n'akwụkwọ. Ihe ùgwù a gbasakwara ndị mmadụ nwetara ikike ịbụ nwa amaala site n'ụzọ akụ na ụba, dịka St Kitts na NevisMmemme ụmụ amaala site na itinye ego (CBI).
The State nke Palestine. Agbanyeghị, ebe ọtụtụ nde ndị Palestaịn bi n'ime ụgbọ ala n'ihi ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ na -esiri ọtụtụ ike ịga mba ofesi ma ọ bụ ịlaghachi n'ala nna ha.
Site na nkwekọrịta “akụkọ ihe mere eme” a, ndị ọbịa Palestine na ndị ọchụnta ego nke họọrọ isonye na St Kitts na Nevis 'Mmemme CBI nwere ike na-aga njem n'efu na-abụghị ọ bụghị naanị na Palestine kamakwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba na ókèala 160, gụnyere agụmakwụkwọ etiti na ebe azụmahịa.